Bicycle Mountain Bike, Electric Mountain Bike, Electric skuuta - Shengtai
Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd. bụ onye na-ebupu igwe eletriki eletrik dị afọ 10, gụnyere mmepe na mmepụta, nke hiwere na Tianjin, China. Ugbu a, anyị na -eburu Tianjin PILOT FREE TRADE ZONE n'okpuru ubu amụma ọdịmma mba na uru ala pụrụ iche. Na mgbakwunye, ahịrị mmepụta anyị na nchekwa anyị dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Tianjin-Binhai, nke dị mfe maka ibugharị. Maka ngwaahịa anyị: anyị jidere eziokwu a ka anyị nwee obi ike na anyị nwere ike rụpụta ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya na ahụmịhe ụlọ ọrụ afọ iri. Maka teknụzụ anyị: anyị nwere ndị otu R&D nọọrọ onwe ha na -enye OEM na ODM. Na maka ọrụ anyị: anyị mere nkọwa niile iji gboo mkpa ndị ahịa anyị.
Ngwaahịa ndị egosipụtaraNgwaahịa ndị egosipụtara
500W 350W ígwè ebike 48V/60V lead-acid batrị ...
Nwoke egwuregwu ọhụrụ 500W 750W moto MTB batrị ...
LCD ngosi ala price ọnụ ala 36V 250W egwuregwu 26i ...
500w 750w Steel Frame Sport Ebike 26 Inch Okenye ...
Mmepe na atụmanya nke ụlọ ọrụ anyị na 2021
N’afọ 2021, ọnụ ahịa ịnyịnya eletrik gbalitere opekata mpe atọ. Nke ahụ bụ bcz nke ọnụahịa nchara etolitere yana ihe ndị ọzọ. Ahịa anaghị akwụsi ike yana kwa ọnọdụ ụgbọ mmiri. Anyị Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd na -a attentiona ntị mgbe niile na usoro ahịa, na -ejikwa njikwa ngwaahịa nke ọma na anaghị akpaghasị usoro ahịa mba ụwa nkịtị. Jikwaa ọnụ ahịa ihe n'echiche nke idobe ịdị mma. Yabụ na enweghị ike ahịa nke afọ a enwebeghị mmetụta dị ukwuu n'ahụ anyị.
ỊGỌRỌ BAỊCHỊ ỤZỌ
Ịgba ịnyịnya igwe n'okporo ụzọ bụ ọzụzụ egwuregwu okirikiri nke ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ, nke a na -eme n'okporo ụzọ awara awara. Ọsọ okporo ụzọ bụ ụdị ọkachamara ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè kachasị ewu ewu, n'ihe banyere ọnụọgụ ndị asọmpi, ihe omume na ndị na -ekiri ya. Ụdị asọmpi asọmpi abụọ a na -ahụkarị bụ mmalite mmalite ihe, ebe ndị na -agba ịnyịnya na -amalite n'otu oge (ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ na -enwe nkwarụ) na ịgba ọsọ ịtọ ebe ngwụcha; na ọnwụnwa oge, ebe ndị na -agba ịnyịnya ma ọ bụ otu n'otu na -agba ọsọ naanị ya megide elekere. Ọsọ ogbo ma ọ bụ “njegharị” na-ewe ọtụtụ ụbọchị, ma nwee ọtụtụ usoro mmalite ma ọ bụ oge nnwale na-agbago n'usoro.